DHAGEYSO: Safiirka Soomaaliya ee Kenya Tarsan oo si kulul u beeniyay warbixintii uu baahiyay Citizen TV | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Safiirka Soomaaliya ee Kenya Tarsan oo si kulul u beeniyay warbixintii...
DHAGEYSO: Safiirka Soomaaliya ee Kenya Tarsan oo si kulul u beeniyay warbixintii uu baahiyay Citizen TV
Nairobi (Halqaran.com) – Telefishinka Citizen ee laga leeyahay dalka Kenya ayaa waxa uu baahiyay warar sheegaya in safaaradda Soomaaliya ee Nairobi ay sameyneyso baaritaan sir ah oo cudurka Coronavirus ah.
Telefishinka ayaa sheegay in warqado caddeyn ah uu helay oo ah in safaaradda ay baareyso muwaadiniinta Soomaalida ee ku nool Islii ee doonaya in ay dib ugu noqdaan dalkooda hooyo ee Soomaaliya.
TV Citizen ayaa wuxuu muujiyay muuqaal lagu sheegay in si qarsoodi ah loo duubay oo tusinaya dad sii galaya dhismo ku yaalla xaafadda Islii ee Nairobi. Sida telefeshinka uu baahiyay dadkaas waxay u socdeen meesha baaritaanka loogu sameynayay, balse lama caddeyn karo sheegashadaas Citizen TV iyo sababta ay dadkaas halkaa u galayeen.
Dawladda Soomaliya ayaa si adag uga soo horjeesatay warkaasi uu baahiyay Telefeshinka Citizen.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Maxamuud Axmed Nuur (Tarzan) oo la hadlay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da ayaa arrintaas gaashaanka ku dhuftay, isagoo sheegay in aysan sir ahayn in dadku ay iska baaraan cudurka, ayadoo la raacayo tilmaamaha dawladda Kenya, laguna baarayo sheybaar ay dawladdu aqoonsan tahay.
“Marka hore, safaaradda Soomaaliya isbitaal ma lahan, mana jiro isbitaal ay heshiis la geli karto”, ayuu yiri Safiirka.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya ayaa intaasi raaciyay, “Dowladda Kenya ayaa tilmaamo bixisay waxaana shardi ah in qofkii ka baxaya halka uu caafimaad qabo uusanna qabin coronavirus. Anaku xaq waxaan u leenahay in dadkeena ku xayiran halkan aan daadgureyno, dowladda Kenya iyo anaguna waan isku waafaqnay, dowladdeena Soomaaliyana waan isku raacnay”.
baaritaan sir ah